UHan Moleman. TCFFC
Uhlwempu uHans Moleman uyintanda ethandekayo yeSimpson . Ukunyamezela kwakhe kuthanda kakhulu, naphezu kokubonakalisa kwiindawo ezinjenge-grill yemoto kaMnu Burns. Ungazivumeli ukuba ilayisense yokuqhuba yakhe ithi "uRalph Melish." Wonke umntu eSpringsfield uyazi kwaye uyamthanda njengoHan Moleman.
I-Movie yeBhayibhile ye-Ned Flanders - "UHomer noNed Bhomboza uMdlu uMariya"
U-Hans Moleman uyathanda ukubonisa ishishini. Fox, Screencap nge FXNOW
Ngempumelelo ye -Passion kaKristu , ngubani olungcono ukungena kwi-movie ye-movie ye-Ned Flanders? Enye yeengqungquthela ze-Ned ezenziwe ngeBhayibhile zibonisa indawo ebethayo, kwaye uhlwempu uHans Moleman ngenye yezinto ezongeziweyo. Eboniswa ifilimu ye-Moleman, le yimbali yakhe yesibini eyayibuhlungu kakhulu.
Ukuthandana noMnumzane uSelma - "Ukhetho lukaSelma"
Nangomalume uSelma Unamazinga. Fox, Screencap ngeTheSimpsonsForever.tumblr.com
Udadewabo kaMarge uSelma unenkathazo emva kokuba uSteyin Gladys afe. Uqala ukucinga malunga nokuba nezingane, ngoko uqala ukuphandana namadoda atholakalayo ase Springfield. U-Hans Moleman akayena umviwa ogqithisileyo, ecinga ukuba uSelma uye watshata uSideshow uBob noTroy McClure. Kodwa ushiya i-Moleman engamahlwempu endlwini engafanele emva kokutya kwabo.
Umkhosi we-Jazz we-Radio - "'Ujikeleze iMountain Springfield'
"U-Moleman olungile kuwe". Fox, ngeVimeo (uBrandon Van Westen)
Esi siganeko sengqondo sikhokelela ekufeni kukaLisa umculi ozithandayo, uBleeding Gums Murphy. Indawo eqaqambileyo ifunda enye imisebenzi kaHans Moleman (ebonakalayo emininzi). Ungumninimzi we-Jazz rediyo ubonisa i-Moleman ngasekuseni. Omnye unokucinga ukuba ilizwi lakhe eliqabulayo libukeka kakuhle kwiijazz ze-jazz.
I-Carman's Car Explodes - "I-Treehouse of Horror IV"
Kodwa akaphephile okwamanje. Fox, Screencap ngeFrkikiac
Kwisiqhelo saseHalloween esikhatywayo sesiqendu saseTwilight Zone , uBab ubona igremlin ngaphandle kwebhasi yesikolo. Kwi-panic eqhubekayo, u-Otto umqhubi webhasi ugijima uHan Moleman endleleni. UMolmanman unako ukuyeka ukukhawuleza emthini, kodwa ukunyamekela kwakhe kukuxhaphaza.
Ukuqhuba indlu ka-Edgar Allan Poe - "I-Homer Triple Bypass"
Ngu Hans Moleman emva kwesondo. Fox, Screencap ngeFrkikiac
Kubonakala ukuba, uHan Moleman usekho shishini lokuthutha. Endleleni kule ngqungquthela, u-Homer ufumana isiganeko sokuthukuthela endleleni kunye noMolmanman onokumangalisa. UMoleman uqhuba indlu kaEdgar Allan Poe , ngoko ke xa uHomer egijima emgwaqweni, yonke indlu iya kunyuka.
Ukubonakalisa Ubudala Bakhe Bokuba "Ubunzima"
"Ukusela kutyhile ubomi bam. Ndinguneminyaka engama-31 ubudala!". Fox, Screencap ngeFrkikiac
Xa uHomer elahlekelwa ilayisense yomqhubi wakhe emva kwe-DUI, uya e-AA apho sifunda inyaniso ngoHan Moleman. Nangona uhlala ecaleni kunye noTatomkhulu e-Springfield Retirement Castle, kwaye ubuthwele ubomvu, obhektshileyo, ama-shareman aseMolman, "Ukusela kuwonakele ubomi bam. Ndineminyaka engama-31 ubudala! "
Ukutshintshwa kukaB Bart - "Burns 'Iindlalifa"
"Kufana nokuwanga i-peanut." Fox, Screencap nge dannybrito.tumblr.com
Xa uMnu Burns efuna indlalifa, ukhetha uB Bart Simpson. UB Bart uyazibhaptiza noMnu Burns ukuba iiSimpson ziqeshe i-deprogrammer ukuze imhlangule. U-Bart uyazakhela yena, kwaye i-deprogrammer engafanelekanga ingqondo ikhupha uHans Moleman ukuba acinge ukuba nguBart. UHomom usamthanda njengendodana, uthi ukumanga "kufana nokumanga i-peanut." UMolman unqikaza "uCowabunga, dude" uyingcali!
Ukuhamba Nomoya - "Umdala Omdala kunye noC"
"Ngaba loo movie yayingenayo imfazwe kuyo?". Fox, Screencap ngeFrkikiac
Xa uBol eyanyanzelekile ukuba enze inkonzo yasekuhlaleni eNtshonalanga yeRhafu yaseRussia, ufunda ukuba abantu asebekhulile abaphathwa kakuhle. Esinye sezikhombisi yindlela yokuhlaliswa yintlupheko yokuhamba kunye nemoya eboniswe ngobusuku be-movie. Sibona isimo sokugqibela, apho umgca wokugqibela odumile kaRhett ubizwa ngokuthi "Ndiyakuthanda. Makhe sitshatile kwakhona. "UHan Moleman nguye onokusixelela ukuba banqamle enye inxalenye. Ubuza, "Ngaba loo movie yayingenayo imfazwe kuyo?" Ngaphambi kokuba ukhuseleko lukhuphe ngaphandle kwegumbi.
Ukubamba Umlilo - "Bart of Darkness"
"Wenza umsebenzi wakho namhlanje, Mnu Sun". Fox, Screencap nge McGarnagle.com
Ingqungquthela yokushisa kwehlobo ehlasela uHome Moleman nzima. Ukushiya iChrisfield Retirement Castle ngesithukuthezi, uyathetha, "Wenza umsebenzi wakho namhlanje, Mnu Sun." Emva koko iilanga zitshisa iiglasi zakhe njengeglasi yokumisa kwaye zibeka uHans ngomlilo.
Umntu Ukufumana Ibhola Yebhola - "Ikhwenkwezi Iyatshisa"
Ekuqaleni kukaHans Moleman. Fox, Screencap ngeFrkikiac
Ngomkhosi wefilimu yaseSpensfield, uHan Moleman wayethetha kwaye wayenenkwenkwezi kwifilimu eyintandokazi kaHomer. Ibali leklasi yomntu (uMolmanman) ogijimayo ngaphandle kwaye atshaywe kwi-crotch enebhola. Enyanisweni, uMoleman uyaziqhenya. I-movie yayiphumelele kangangokuba iHollywood yayidlulisela uGeorge C. Scott .
Ukuma kwiFilimu: Iimifanekiso ezi-11 malunga nokuma ukuhlaziya
Indlela yokucoca imibala yePende
Iimpikiswano zee-Olimpiki kunye ne-Scandals ku-Swimming